Fayraska Korona oo waddamo badan oo caalamka ku sii fidaya | HalQaran.com
Home Caalamka Fayraska Korona oo waddamo badan oo caalamka ku sii fidaya
China (Halqaran.com) – Waxaa sare u sii kacaya tirada dadka u geeriyoonaya fayraska Korona oo dalka shiinaha oo qudha ku dilay 259 qof halka dadka xanuunka la il daranina ay gaadhayaan 11791 qof.
Xukuumadda Shiinaha ayaa dunida ugu baaqday in loo muujiyo garab istaag dhanka caafimaad ah, maadama fayraskani uu weerar ba’an ku haya dadka Shiinaha.
Markii lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo loo sababeeyay fayraskan kaddib dalalka dunida ayaa isla markiiba bilaabay tallaabooyin ay ku joojinayaan duullimaadyada isku xira iyaga iyo Shiinaha iyaga oo adkeeyay socdaalka dadka uga imanaya dhanka Shiinaha.
Iyada oo fayraskani faro ba’an ku hayo Shiinaha ayaa waxaa Iyana jirta in ilaa toban dal oo ka mid ah dunida in uu gaaray xanuunkani sida Ruushka, Britain iyo Taylaaniga.
Dalalka qaarkood oo ka gaashaamanaya in fayraskani uu usoo xaluusho dalalkooda ayaa gabi ahaanba joojiyay fiisihii ay siin jireen dadka wata dhalashada Shiinaha, dalalka sidaasi sameeyay waxaa ugu horreya Jabbaan, Singaboor, Mangooliya, Fitnaam iyaga oo sidoo kalena muwaadiniintooda kula taliyay inaanay u socdaalin Shiinaha.
Britain iyo Taylaaniga.
fayraska Korona oo dunida ku sii fidaya